क्रसर ड’नहरुलाई प्रशासन संरक्षणको उपज हो दिलीपको ह’त्या ! – Khabarhouse
क्रसर ड’नहरुलाई प्रशासन संरक्षणको उपज हो दिलीपको ह’त्या !
Khabar house | २६ पुष २०७६, शनिबार ०८:१३ | Comments
शैलेन्द्र क्रान्ति (पत्रकार) : सुतिरहेकै बेला बिहान ५ बजे मोबाइलमा घण्टी बज्यो । ब्युझिएँ । एक पटकमा फोन उठाउन सकिन । दोश्रो पटक फेरी फोन आयो, उठाएँ । मिथिला नगरपालिका ५ श्रीपुरका सुनिल भाई भन्नेले फोनमा भन्छन् ‘दाई दिलीपको ह’त्या भयो’ । म अ’कम’काए र सोधे कुन दिलीप ? उनले भने ‘ओम प्रकाश भन्ने दिलीपकुमार महतो ।
टिपरबलाले कि’चेर उसको विहानै औरही खोलामा ह’त्या गर्यो । दिलीपले हामीसंगै गाउँको पूर्व र पश्चिम पट्टीको खोलामा भइरहेको अ’वैध उत्खननको वि’रोध गर्दै आएका थिए । त्यही दिलीप ।’ मैले झण्डै डेढवर्ष अगाडीको कुरा सम्झे । एउटा गाउँमा उदाउन लागेका होनहार, आटिला, ईमान्दार युवाको निर्मम तरिकाले गरेको ह’त्याले निकै स्त’व्ध भए । पत्रकार हुँ । समाचार लेख्नु हाम्रो दायित्व हो ।
र घ’टनाको बाँकी कुराहरु बुझ्न र लेख्न तर्फ लागे । विभिन्न तथ्यहरु खुल्दै गयो । झण्डै डेढ वर्ष अगाडीको कुरा हो । मिथिला नगर पालिका ५ श्रीपुर गाउँलाई नै जो’खिममा पारेर अ’वैध उत्ख’नन हुँदा सुनिल र दिलीप लगायतका युवा हरुले मलाई एक पटक बसही खोलामा जसरी भएपनि केहि पत्रकारहरु आइ दिनु पर्यो भन्दै आग्रह गरेका थिए । मैले त्यति बेला जनकपुरका ८।९ जना पत्रकार साथीहरुसंग समन्वय गरे ।
र हामी केहि पत्रकारको टीम ढल्केवरको पूर्वछेउमै रहेको बसही खोलामा पुग्यौं । दिलीप लगायतका युवाहरुको समुह गाउँ र अ’वैध उत्खनन भएको खोलाको दृश्य हामीलाई देखाए । त्यहाँ त स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकारको मिलेमतोमा क्रसर र टिपर मालि कले अ’ति नै गरेका थिए । २५ फिट गहिरोसम्म विघौं खोला खनेर तहस नहस पारेका थिए । त्यहाँ पत्रकार आएको थाहा पाएर केहि क्रसर र टिपर मालिकहरु पनि केहि चेला चपाटे लिएर पुगे ।
युवाहरुको समुहलाई डारए, धम्का’एकाए । पत्रकारहरु भएको कारणले युवाहरुलाई उनीहरुले कु’टपीट नै गर्ने आँट गरेन । त्यस अघि कतिपटक ती अ’वैध उ’त्खननको वि’रोध गर्ने गर्ने युवाहरुको समुहसंग क्र’सर तथा टिपर मालिक र ईलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरका प्रहरीसंग कति पटक वि’वाद समेत भएको थियो । कति पटक जोखिम मोल्दै स्थानीय तथा युवाहरुको समुहले टिपर र चालकलाई समातेर ईलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरको जिम्मा लिएका थिए ।
तर ईलाकाले समातेको टिपर आपसी मिलेमतोमा छाडिदिने गरेको थियो । उत्खननको बेला स्थानीयले बोलाउँदा प्रहरी नजाने र समातेर कार्वाहीको लागि जिम्मा लगाएको गाडी मिलेमतोमा त्यसै छाडि दिन्थे । सबै पक्षहरुसंग बुझेर हामी रिर्पोटिंग गरी जनकपुर फर्कि यौं । पत्रकारहरुले आ आफ्नो हिँसाबले विभिन्न संचार माध्यमहरुमा समाचार सम्प्रेशन तथा प्रकाशन गर्यौं । केहि दिनसम्म अवैध खोला उत्खनन नियन्त्रण रह्यो ।
केहि समय पश्चात अवैध खोला उत्खननको धन्धा चलि रह्यो । हालपनि उस्तै छ । त्यसको फल स्वरुप मिथिला नगरपालिका भित्रको अधिकांश खोलाहरुमा स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारको मिले मतोमा क्रसर तथा टिपर मालिकले वित’ण्डा नै म’च्चाएका छन् । जसको कारण त्यहाँका कतिपय गाउँटोल र चुरे निकै जो’खिममा छन् । यसरी स्थानीय युवाहरु अ’वैध उत्खननको विरुमा रहेर अभियान चलाइरहे ।
स्थानीय प्रहरी प्रशासन, स्थानीय सकरारका जनप्रतिनिधीहरु कमिसनमा खाँदै मो’टाए र मुकदर्शक रहे । बिच बिचममा हामी पत्रकारहरुले अ’वैध खोला दोहनको समाचार लेख्ने काम गरिरह्यौं । तर प्रशासननै मुक दर्शक भएपछि कसको के लाग्छ र ? क्रसर तथा टिपर मालिक खोला खन्दै बच्दै मा’लामाल भए । प्रहरी प्रशासन नै मिलीसकेपछि कसको बाउको के लाग्छ र ? भन्दै क्रसर तथा टिपर मालिकहरुको आ’त्मबल बढ्दै गयो । टुडेपाटिमा खबर छ ।